Nagu saabsan - HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Ltd.
HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Limited waa mid ka mid ah soosaaraha birta & aluminiumka ugu weyn iyo dhoofiyaha Shiinaha. Waxay ku taallaa gobolka Shandong ee Shiinaha, oo u dhow Dekadda Qingdao iyo Dekadda Tianjin, rarka xamuulka degdegga ah iyo keydinta xamuulka dhulka. Shirkaddu waxay leedahay laba khad wax -soo -saarka GI oo leh awoodda wax -soo -saarka sannadlaha ah ee 600,000MT. Mid ka mid ah xariiqa GI -ga waxaa loogu talagalay in si gaar ah loo soo saaro garbaha birta ah ee GI -ga oo tayo sare leh oo loogu talagalay Dhismaha Ganacsiga iyo Dhismayaasha.shirkadu sidoo kale waxay leedahay hal xariiq wax soo saar PPGI oo leh Awood 150,000MT sanadkiiba Shirkaddu waxay leedahay qalab wax -soo -saar oo horumarsan oo ay ka mid yihiin saddex Kulayl Galvanized Khadadka wax -soo -saarka gariiradda birta ah, laba khadadka wax -soo -saarka gariiradda birta ah oo midabkoodu dahaarka yahay iyo lix xarig goynta gariiradda birta kulul oo duuban. Shirkadda waxay heshay shahaadooyin ISO 9001-2008, ISO14001-2004 iyo OHSAS18001.
Dukaan hal-joog ah oo ah alaabada birta ah, astaamaha aluminiumka iyo qalabka adag, ayaa buuxiya dhammaan shuruudahaaga. Indepent Logistic ee Hawada, tareenka iyo badda, waxay bixiyaan adeeg ugu fiican oo leh tayo wanaagsan.
HUIYUAN waxaa lagu aqoonsaday xaqiijinta nidaamka tayada ISO9001-2000, oo leh koox kormeer farsamo oo xirfad leh oo adag si loo hubiyo tayada iyadoo la dabagalayo koorsada oo dhan laga soo bilaabo wax soo dhoofinta. Dammaanad -qaadkani wuxuu macaamiisheena ka heli karaa badeecadaha ugu tayada wanaagsan iyo xiriirka ganacsi ee ugu wanaagsan.
Birta adag waxay leedahay koox iibin iyo adeeg dhammaystiran oo ganacsi shisheeye ah, waxayna abaabuli kartaa wax -soo -saarka iyo dhoofinta iyadoo loo eegayo shuruudaha farsamo ee kala duwan iyo caadooyinka ganacsi ee dalal iyo gobollo kala duwan. Waxaan ku tiirsannahay habka wax-soo-saarka adag iyo nidaamka xakamaynta tayada, gaadiidka saadka xirfadda leh iyo adeegga xoojinta xirmada dekadda, xulashada shirkadda maraakiibta ee heerka sare ah, adeegga dabagalka waqtiga iyo hufan ee mustaqbalka si loo hubiyo in alaabada shirkadda la keeni karo waqtigii loogu talagalay oo la ilaalin lahaa tirada damaanad qaaday.
Si si wanaagsan loogu adeego macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, Waxaan mas'uul ka nahay saxeexidda qandaraasyada khuseeya alaabada dhoofinta ee shirkadda, boos ka qabashada markabka dhexdiisa, xirxiridda kormeerka dambe, caddeynta kastamka iyo hababka kale. Waqtigan xaadirka ah, alaabta shirkadu waxay u dhoofisay Kuuriyada Koonfureed, Koonfur -bari Aasiya, Bariga Dhexe, Bariga Yurub, Koonfurta Ameerika iyo dalal iyo gobollo kale, waxaana si weyn u ammaanay macaamiisha. Waxaan si kal iyo laab ah ugu martiqaadeynaa saaxiibbada gudaha iyo dibaddaba inay na soo booqdaan!
Ujeeddada shirkadeed: si loo abuuro qiime macaamiisha; si loo abuuro madal loogu talagalay horumarinta shaqaalaha iyo farxadda; si ay gacan uga geystaan ​​faafinta fikradaha dhaqanka ee horumarsan iyo horumarka bulshada iyo wada noolaanshaha. Abuur alaabta heerka koowaad ah oo u samee macaashka ugu badan macaamiisha.
daacadnimo daacad ah, jacayl weligiis.
Ganacsiga heerka koowaad, hawlgal waara.
ilbaxnimo, midnimo, shaqo adag, wada noolaansho
qaado bulshada oo isticmaal bulshada
xoog iyo firfircooni leh
Philosophy Falsafadda ganacsiga: qoris daacad ah, hal -abuur aan xad lahayn, adeeg weligeed ah, heer sare ah
Con Fikradda Qoyska: Jacayl ku socodsii reerkayaga yar, kuna dhis qoyskeena weyn jacayl
Concept Fikradda adeegga: xamaasad, daacadnimo, xirfad -xirfadeed, diirad saarid, diirad saarid iyo hufnaan
Concept Fikradda horumarinta: ururi hibooyin oo raadi horumar guud
Concept Fikradda kartida: marka hore akhlaaqda, ku habboon booskiisa
Philosophy Falsafadda xirfadeed: shaqada jacaylka, ixtiraam macaamiisha
Philosophy Falsafadda maamulka: fudud oo hufan
Aluminum-Zinc Steel, Dhismaha Profile Aluminium, Ppgi Ppgl, Dhuxul-Galvanized, Gariiradda bireed Aluminum, Gariiradda Sheet Aluminum,